Ciidamada Dowlada oo Amaanka Magaalada Muqdisho Adkeyey – STAR FM SOMALIA
Wadooyinka Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamo badan oo ka tirsan Dowladda Federalka Somalia, kuwaasi oo xaqiijinaya ammaanka caasimada, iyadoo gaadiidka dagaalka ee ciidanka ay wadooyinka ku kala socdaalayaan.
Ciidankaan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidamada Dowladda ayaa waxaa aad loogu arkayaa agagaarka Garoonka Muqdisho, wadada Iskuul Buluuziya, Nawaaxiga Afisiyooni iyo wadooyinka gala Garoonka Muqdisho,.
Sidoo kale ciidamadaan Dowladda ka tirsan ayaa lagu arkayaa agagaarka Madaxtooyada Somalia, wadada Ceelgaabta , wadada hormarta Dekada Magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda.
Ciidamada ayaa waxaa ka muuqda feejignaan dhanka ammaanka ah iyaga oo, la baarayaan gaadiidka si taxadar leh.
Meelaha qaar looma ogala dadka iyo gaadiidka inay maraan, waxaana tani ay muujinaysa in shirka Muqdisho goor dhaw ka furmi raba awgiis loo adkeeyay ammaanka caasimada Magaalada Muqdisho.
Xilliyada ay Muqdisho ka qabsoomayaan shirarka noocaan oo kale ah ayaa ammaanka Magaalada Muqdisho sidaan loo adkeeya, waxaana laga feejignaadaa weeraro ay suurtagal tahay inay soo qaadaan Kooxda Al Shabaab.
27-kii Bishan oo ku beegneyd labo maalin ka hor Al Shabaab ayaa weerar aad u xoogan ku qaaday Hoteelka Jazeera ee Magaalada Muqdisho, weerarkaasi dad kala duwan ayaa ku dhintay
Puntland iyo Jubbaland oo ka baaqsaday kaqeyb galka Shirka Hiigsiga 2016